Semalt: Kutheni umxholo ubalulekile kwi-SEO?
Umxholo kunye ne-SEO: Ulwalamano
Ukudalwa komxholo oLungiselelwe
Ukulungiselela umxholo oDaliweyo
I-Semalt Copywriters Abonelela ngeNjini yokuKhangela eKulungiselelwe imiGangatho
Usenokuba ukhe waliva eli binzana amaxesha amaninzi, kodwa wakhe wazama ukufumana ukuba kutheni bebiza umxholo wokumkani.
Kungenxa yokuba umxholo unamandla okukhulisa ubume bewebhusayithi kwiiSERPs (iphepha lokuKhangela iziphumo zeNjini).
Ewe, kuphela icala eliqaqambileyo. Ukuba kukho iziphoso kumxholo, inokutsala isohlwayo sikaGoogle kwaye ikhuphe iwebhusayithi yakho ngaphandle kwiligi.
Eli nqaku liza kukunceda uqonde umxholo, i-SEO, kutheni imixholo ibalulekile kwi-SEO, onokuyenza ukuphucula umgangatho womxholo, kunye nokunye okuninzi.
Icandelo lokugqibela likwabandakanya isisombululo sokumangalisa esinokukunceda umxholo wakho udlule kukhuphiswano kunye nenqanaba eliphezulu kwiziphumo zokukhangela.
Umxholo wayo nayiphi na isiqwenga solwazi osinika abaphulaphuli bakho ngejelo. Olu lwazi lunokuba yiyo nantoni na nangayiphi na indlela.
Ingaba sisicatshulwa, umfanekiso, ividiyo, i-GIF, iwebhusayithi, ividiyo bukhoma, okanye nantoni na enye kwiwebhusayithi, ijelo losasazo loluntu, usetyenziso (iwebhu kunye neselfowuni), okanye naphi na.
Ukuqonda okungcono, jonga le nkcazo yomxholo ovela ngaphezu kweengcali ezingama-40 kwiNtengiso yeDigital.
I-SEO (iNjini yokuKhangela) yinkqubo yokuphucula umgangatho kunye nobungakanani bezinto eziphilayo ezithi iwebhusayithi yakho ifumane ngeenjini zokukhangela.
Ukuba, njengabo bonke abanini bewebhusayithi, injongo yakho kukwenza iwebhusayithi yakho kwindawo ephezulu kwii-SERPs (amaphepha okuKhangela iziphumo ze-injini), i-SEO iyakunceda.
Namhlanje, i-SEO ijikeleze iGoogle. Ke, musa ukudideka ukuba umntu othile ufuna ukwenza iwebhusayithi yakho ngokweGoogle.
Ukuze ufunde ngakumbi nge-SEO, imigaqo-nkqubo yokusebenza, iindidi zayo, kunye nezinye izinto ezifanelekileyo, yiya kwesi sikhokelo-bookmark SEO yesikhokelo sabaqalayo nguSemalt.
Injongo yazo zonke i-injini yokukhangela kukubonelela ngeziphumo ezifanelekileyo kwaye ziluncedo ngokukhawuleza. Kodwa bayazi njani ukuba iziphumo ziyafumaneka kwaye ziluncedo?
Ewe, kukho ii-algorithms zokufumanisa ukuba ngaba iziphumo zinokuyalela abasebenzisi kumxholo oxabisekileyo okanye cha. Xa ii-injini zokukhangela zisebenza ukuba isiqwenga somxholo sinokubonelela ngexabiso eliphezulu, balibeka kuqala.
IsiKhangeli seNjini yokuKhangela
Umgangatho wenjini yokukhangela, okanye umxholo ophezulu, sisiqwenga seenjini zokukhangela ulwazi siya kubonelela ngexabiso kubaphandi. Umxholo ikakhulu wenziwe ngokoluhlu lwenjini yokukhangela kuqala.
Masithi uqalisa ukukhangela iimveliso ezithandekayo ku-Google. Ngaphantsi komzuzwana, uluhlu luya kubonakala kwiscreen sakho esineziphumo ezifanelekileyo neziluncedo.
Iziphumo zokuqala kolu luhlu ziqulathe uninzi lwejini yokukhangela olwenziwe ngcono.
Iziqulatho zeNjini yokuKhangela eMiselweyo
Ukuchongwa nokwenziwa kwezinto ezahlukeneyo komxholo kuthathe isigqibo sokuba uya kuba kwinqanaba eliphezulu kwiziphumo zophando okanye cha.
Nazi izinto eziphambili zazo zonke i-injini yokukhangela elungiselelwe:
Xa uzigcina ngononophelo ezi zinto, ii-injini zokukhangela ziya kuchonga umxholo wakho njengexabisekileyo kwaye ulungelelanise kuqala. Masibaqonde nganye nganye.
Ulwazi luyinyani malunga nomntu okanye into ofuna ukuyinika abaphulaphuli bakho. Ingaba uhlobo lweenkcukacha, amanani, imiyalelo, iingcebiso, isikhokelo, okanye nantoni na onqwenela ukuyinika.
Qiniseka ukuba ulwazi olunika lona aluchanekanga kwaye alubadanisi abaphulaphuli bakho.
Isizathu sesizathu sokuba uthumele olu lwazi ngaphandle. Ingaba kukufundisa, ukwazisa, ukuzenza uthandwe, ukwazisa ishishini lakho, okanye nantoni na eyenye. Injongo ikwabandakanya ulindelo lwakho emva kokunika olo lwazi kubaphulaphuli.
Qiniseka ukuba uyila le ndlela ngendlela yokuba idibane nabaphulaphuli kwaye ihlangane neenjongo zakho.
Abaphulaphuli ngumntu olindelweyo okanye iqela labantu ofuna ukufumana ulwazi. Ukujolisa abaphulaphuli abalungileyo kukunceda usete izinto ezinjengeenkcukacha, ithoni, kunye nembonakalo yolwazi onqwenela ukulubonelela.
Chonga abaphulaphuli bakho ekujolise kubo, kwiimfuno zabo, iingxaki abajongana nazo, kunye nemibuzo abanokuyibuza emva kokufumana ulwazi lwakho. Ceba umxholo ophakathi kubaphulaphuli bakho, hayi enye into.
Ifomu kukujonga kokugqibela kolwazi xa ulwazisa kubaphulaphuli bakho. Fumanisa ukuba abaphulaphuli bakho ekujongwa njani bayakuqonda ngcono-ngendlela yokubhaliweyo, umfanekiso, iaudio, okanye ividiyo.
Okokuqala, thatha isigqibo sohlobo lomxholo wakho-onolwazi, onemvakalelo, onzulu, okanye ohlekisayo. Emva koko khetha indlela ofuna ukuyiveza.
Isiteshi sisixhobo apho ulwazi lwakho lufikelela khona kubaphulaphuli. Ingaba yiwebhusayithi, ibhlog, iqonga leendaba ezentlalo, i-app yeselfowuni, umabonwakude, iphephandaba, okanye nantoni na enokuthetha ngcono nabantu ekujolise kubo
Qinisekisa ukuba umxholo wakho uyafumaneka kwizitishi apho abaphulaphuli bakho bachitha ixesha elininzi.
Umxholo okhethiweyo ubalulekile kuba uya kunceda indawo yakho yewebhusayithi ephezulu kumaphepha enjini yokukhangela. Kuya kuphucula ukubonakala kwakho kwi-intanethi.
Ngelixa usenza umxholo ophucukileyo, qinisekisa ukuba isembindini weemfuno zabaphulaphuli bakho ekujoliswe kubo, kwaye onke amacandelo enjini yokukhangela enziwe agqalwa ngononophelo.
Ukongeza, kufuneka uqwalasele izinto ezininzi zobuchwepheshe ezinje ngamagama aphambili, ii-URL, iinkcazo zemeta, izihloko zemeta, kunye nezinye.
Kukho amanyathelo ambalwa wonke umntu ekufuneka awalandele ngelixa usenza umxholo ophezulu. Bazi:
1. Uphando lwamagama aphambili
Uphando lwamagama aphambili yinto yokuqala ekufuneka uyenzile kuba kuphela amagama aphambili afanelekileyo aqinisekisa ukuba umxholo wakho uyafumaneka ngeziphumo zophando.
Ngexa uphanda, zama ukunqanda amagama aphambili akhuphisanayo kwaye ukhethe amagama aphambili omsila. Unokuthatha kunye nesixhobo esisebenzayo sophando lwegama elingukhiye, njengegama elingumcwangcisi wegama elikwiGoogle.
Emva kokukhetha amagama aphambili afanelekileyo, kuya kufuneka ugqibezele isihloko sesiqulatho sakho. Kwisikhundla esiphakamileyo, kubalulekile ukuhambelana nesihloko namagama akho aphambili. Ngamanye amagama, isihloko sakho masibe negama eliyintloko.
3. Yenza ulwandlalo
Ngoku, kuya kufuneka wenze ulwandlalo lwento yonke imixholo wakho ekuya kuba nayo. Yenza isigqibo sentloko, zingakanani izihlokwana, imbonakalo, nasemva kwamagama amangakhi.
4. Yenza iFundeke ngokuLula
Yenza umxholo wakho ufundeke ngokulula ngokwaphula iziqendu ezincinci kwizivakalisi ezi-1-2. Yongeza izinto ezibonwayo / izihlokwana emva kwamagama ali-150-250.
Abafundi bachitha ixesha elincinci kakhulu kwiphepha lewebhu. Ukuba ababoni kwanto inomdla wokuncamathela, baya kumka.
5. Sukuyeka ukuvela kuMxholo
Xa usenza umxholo, namathela kwisihloko. Akukho mfuneko yokubandakanya yonke into kwisiqwengana somxholo. Gxila kwisihloko kwaye uzame ukuwenza ube luncedo.
6. Bambelela kwiThagethi ephambili yeTax
Umxholo wakho kufuneka ube kwindawo ephambili yegama lakho eliphambili. Ukuba ufuna umxholo wakho ubekwe kwinqanaba kuqala, namathela kwigama lakho elingundoqo kwaye ungazijongi amagama aphambili.
7. Faka iiKhonkco
Iinjini zokukhangela ziyavuma ukuba umxholo wakho unokuthenjwa xa unemakhonkco kwiiwebhusayithi ezifanelekileyo, ezinokuthenjwa kunye nezigunyazisiweyo. Qiniseka ukuba amagama owasebenzisayo ukwenza amakhonkco ahambelana nendawo eyalelweyo.
Umzekelo, jonga ikhonkco elingezantsi elinegama elingundoqo 'isikhokelo se-SEO sabaqalayo.' Xa ucofa eli khonkco, liya kujika kwiwebhusayithi yeSemalt, apho unokufumana into enye ekhankanywe kule khonkco.
Ukulungiselela umxholo odaliweyo kuthetha ukuba ungena kwicandelo lobuchwephesha bokusebenza komxholo.
Kubandakanya ukwanda okulandelayo:
Masibaqonde nganye nganye:
Ubume be-URL yephepha lewebhu yinto yokuqala yokucinga yabasebenzisi. Ukuba i-URL yakho ayinalo igama eliphambili elichaphazelekayo, amathuba okuba abasebenzisi mabangatyeleli indawo yakho.
I-URL engaqondakaliyo kunye nexesha elide ihlala isoyikisa abasebenzisi bokukhangela, kwaye bayathandabuza ukucofa kwikhonkco. Qonda ngezi zixhumanisi zintathu zikhankanywe ngezantsi:
I-https: //semalt.com/fullseo - Abasebenzisi bayaqonda kwangoko ukuba eli khonkco liza kubathumela kwakhona kwiwebhusayithi yeSemalt eneenkcukacha malunga ne-FullSEO. Abayi kuba sathandabuza ukucofa kuyo.
I-https: //www.nytimes.com / 2006 //06/27/technology/27google.html? ulwazi olunxulumene ne-SEO.
http://www.baystreet.ca/viewarticle.aspx?id=588707 - Abasebenzisi abayiqondi ukuba le nto ikhonkco lantoni. Ke, bayathandabuza ukucofa kuyo.
I-tag yesihloko yintloko (echazayo) oyibonayo kwiziphumo zokukhangela. Banceda uGoogle, kunye nezinye ienjini zokukhangela, ukuqonda imixholo yakho.
Iimpawu zetayitile zezona zinto zinokuthi zithathe izigqibo xa abasebenzisi kufuneka bakhethe eyona mphumela iphambili. Qwalasela ezi zinto zine zibalulekileyo ngelixa uhambisa iithegi zamanqaku:
Cacisa ngakumbi ngelixa usenza itayitile yentloko.
Sukuyifaka ithegi ngesihloko ngamagama aphambili.
Qiniseka ukuba ayidluli i-60.
Igama eliphambili elijolise kulo kufuneka libe ekuqaleni.
Isicatshulwa esincinci esincinci osibonayo ngezantsi kwethegi yesihloko / inqaku elinokucofa kulo kunye ne-URL ibizwa ngokuba yinkcazo yeMeta.
Inkcazo enika ulwazi kunye nenqaku le-meta equlathe igama eliphambili ekutsaleni linomdla ngokuchofoza ngakumbi. Cinga ngezi zinto zintathu zibalulekileyo ngelixa uchaza indlela ekuchaza ngayo imeta:
Qinisekisa ukuba isicatshulwa sombhalo singaphantsi kwe-160.
Yenza isicatshulwa sibe sifutshane kunye nokujonga ngokuthe ngqo umxholo.
Quka igama elingundoqo elichongiweyo kunye namagama aphambili afanelekileyo.
Eli nqaku licacisile ukuba kutheni umxholo ubalulekile kwi-SEO kwaye unokwenza ntoni ukwenza umxholo wenjini yokukhangela.
Kuthekani ukuba konke oku kunye nangabakhupheli abaziingcali bakwenza?
Amagqabantshintshi abasebenza ngokukhuselekileyo kwa-Semalt bangakhathaleli umxholo wakho kuphela, kodwa baqinisekise ukuba luphezulu kuluhlu lweziphumo zokukhangela kuGoogle kwaye uvelise umdla womsebenzisi.
Yonke ishishini okanye umnini webhusayithi ufuna umxholo wamaphepha ewebhu, iiposti zebhlog, amaqonga eendaba ezentlalo, indlela yokukhokela, kunye nabanye.
Ukuba baqesha umshicileli osisigxina, usenokungakulungeli ukwenza uhlahlo-lwabiwo mali. Kwaye, i-freelancer ingathatha ixesha elininzi ukuyila umxholo.
Kubangela ukudideka ezingqondweni zabaninzi beshishini okanye abanini bewebhusayithi, kwaye abaqondi ukuba benze ntoni.
Ewe, ayisiyo imeko yokudideka kodwa ukucinga ngesisombululo / Semalt. Ababhali bekopi eSemalt baqinisekisa ukuba zonke iimfuno zakho zomxholo zithathwa ngononophelo.
Ngamanye amaxesha ngelixa uzenzela ngokwakho umxholo, abantu benza iimpazamo ezincinci ezichaphazela ubume bewebhusayithi yabo. Ukuphepha amava anjalo, kuya kufuneka uqeshe ababhali abaziingcali zikaSemalt.
Semalt + Ekumgangatho ophezulu = = Uya kuba sisityebi.